Bacinga ntoni abafundi malunga noMthombo ovulekileyo weGeospatial -Geofumadas
NgoJulayi, 2011 Ukufundisa i-CAD / GIS, Geospatial - GIS, qgis
Eli nqaku lisekwe kwinkcazo eyenziwe kwi-FOSS4G e-Barcelona ngoSeptemba we-2010 ngu:
U-Iraklis Karampourniotis kunye no-Ioannis Paraschakis - weYunivesithi yase-Aristotle yaseThessaloniki
UZoo Arvanitidou - weYunivesithi yaseAegean
Ikhonkco lenzekile kum UGabriel Reyes, kwaye isekwe kumbuzo, ukuba isoftware enguMthombo oVulekileyo inokuqwalaselwa rhoqo kwizifundo zekhosi yendawo yomsebenzi weyunivesithi okanye ekunikezelweni kwezifundo zasimahla zabafundi kunye nabantu ngokubanzi.
Impendulo ekugqibeleni iyangqinisisa, nangona apha endleleni kukho izinto ezininzi ekufuneka zisebenze ekushumayeleni kwabafundi abanokungavumi kulawula okokuqala isixhobo esingadumanga, njenge-ESRI, AutoDesk okanye i-Intergraph; ngenxa yokucinga ukuba abayi kuvula amathuba amaninzi kwimarike yabasebenzi.
Yaphinda yabamba ingqalelo yam, ukuba GIS asibonise ngaphandle kokuba sisoftware "iphelile"Ikhankanyiwe ngaphakathi kwezinye iinkqubo ezizezinye zesoftware I-AutoCAD Imephu ye3D, ArcGIS y Geomedia; izisombululo ngokuqinisekileyo ezinenqanaba lokuthandwa kunye nogunyaziso lwentengiso ekufuneka zifunwa kakhulu ngabo banomdla kwikhosi yeeNkqubo zeNgcaciso yeJografi. Kwinqanaba leenkampani zabucala ezibonelela ngeenkonzo zoqeqesho, ukubuyela umva kwesi sithintelo kuye kwacotha, nangona kunjalo i-akhademi ingadlala indima ebalulekileyo ukuba izibonelelo zesoftware yasimahla enayo ngoku malunga nokukhula nokwamkelwa kulawulo zithathwa njengezoluntu okanye icandelo leshishini, ngaphandle kwento ethethwa kukunciphisa umsantsa wokungekho semthethweni kunye neendleko eziphantsi.
Umzamo wokuqala ongaphumelelanga
Ababonisi bachaza ukuba babenomzekelo ngo-2006 xa babeka i-GRASS kwiilebhu kunye neMephu ye-AutoCAD kunye neArcGIS. Ngelo xesha isiphumo kukuba abasebenzisi babengaluthandi ujongano olungenabuhlobo lwe GRASS, kwaye kuya kuqondwa ukuba ukudibanisa into kunye nenye akusoloko kuzisa iziphumo ezilungileyo, okanye kuyibone njengesixhobo esizimeleyo somxholo apho ukuthelekiswa kuyinxalenye yeendlela ezilungileyo ezitshintshiwe kuluntu oluVulelekileyo.
Xa uluhlu olupheleleyo lwezixhobo zophuhliso, ukwakhiwa kwedatha, ulawulo, i-vector / uhlalutyo lwe-raster kunye nokupapashwa kubonisiwe, siyaqonda ukuba nangona amanyathelo e-OSGeo ayengazalwanga ngendlela ehambelanayo, ngoku sinokuqinisekisa ukuba imigangatho yokubekwa emgangathweni kunye nokuzinza ifumene ulungelelwaniso olulungeleleneyo, kunye nokuqhelaniswa nokomgangatho welaphu.
Itshathi yangaphambili zisiwe NguJorge Sanz kunye noMiguel Montesinos kwiNkomfa ye-gvSIG yokuqala yaseLatin American izama ukucacisa ukwahlula kwinqanaba elithe tyaba zezixhobo ezijolise kwidesktop, amathala eencwadi aluhlaza kunye nezinye iindlela ezinokubakho kwiseva engwevu. Imfusa abaphathi beenkcukacha kunye kwinqanaba leelwimi.
Le panorama ye-OSGeo ecosystem isinceda ukuba siqonde ubudlelwane phakathi kweeprojekthi kwaye ngaphezulu kwako konke ukuqonda ukuba iyantlukwano iyimfuneko kwaye isebenza ngokude imigangatho ibekwe emgangathweni.
Umzamo wesibini, uphumelele
Izithethi ziphawula ukuba kwinzame yesibini bohlule iikhosi phakathi kwabafundi abenza isidanga kunye nabo sele bephumelele okanye bekwinqanaba lesidanga sokuqala. Ukwenza oku, basebenzise iikhosi ezongezelelweyo:
I-QGis + GRASS + PostGIS kwizifundo zabo bathweswe izidanga
I-QGis + PostGIS kwiiLabhoratri zabangekathweswa izidanga
Ezi ndiziphawule zibomvu kumzobo odlulileyo, ukubonisa ukuba ziphi na, ngokusisiseko kwimeko ye-C ++ edibene nomthombo wokushicilela okwi-Intanethi weMephuGuide Open Source okanye iMephuServer.
Le theyibhile ilandelayo ibonisa izihloko ezazifakiwe kwizifundo nakwiilabhoratri.
Ukukhangela kunye nokudalwa kweempawu
Uhlalutyo kunye nemibuzo yendawo
Ukuhlolwa kwejogoding kunye nenethiwekhi
Ukusetyenziswa kwee plugins
Ukubhaliswa kunye nokuguqulwa kwemifanekiso
Ukungena kweDatha yeLungelo
Uhlalutyo kunye nokunxibelelana kwendawo
Ukubonwa kwe-3D kunye nokuhlaziywa komfanekiso
Inkxaso kuhlalutyo lwenethiwekhi
Uvavanyo lomsebenzi we-LRS
Uvavanyo lwenkxaso yenethiwekhi
Ukudalwa koovimba bendawo
Inguqu phakathi kweendlela ezahlukeneyo zereferensi
Idatha echazayo kunye ne-spacial
Itshathi elandelayo ibonisa umbono wabantu ekupheleni kwezifundo, umdla onokubangela -kwaye kufuneka kudityanwe-imiswe ngokweenkcukacha ngakumbi, isasaza izixhobo ezinje ngeemodyuli zoqeqesho zoqeqesho, imibhalo yendlela, iibhanki ze izintoimigangatho yokhuphiswano kunye neencwadana, ezinokuthi zilungelelaniswe ziiyunivesithi okanye iikholeji zobugcisa; Rhoqo izisombululo zobunini zeli zabelana kuphela ngeencwadana. Ngale nto, kunokuba yinto efanelekileyo ukwenza iikhosi ezimfutshane okanye iidiploma ezibanzi ezinikezela ubungakanani obupheleleyo kwimeko ye-OSGeo kokubini kumgca we-C ++ nakwimeko yeJava enokubanakho (ngokoluvo lwam) ngenxa yeplatform yayo ukufikelela, ukwenziwa kwamazwe ngamazwe okucwangcisiweyo kunye neyantlukwano kwizisombululo.
Inkxaso entle kakhulu
Ukukhawuleza kakhulu kwaye kukhuselekile
Iiplagi ukhetho zinobuhlobo kakhulu ngenxa yokwandisa kunye nokusebenziseka.
Uncedo olugqibeleleyo lwe-GRASS
Kubhalwe kakuhle kakhulu
Njengoko kunokubonwa, iikhrayitheriya zabaqeqeshi abaphumeleleyo zijolise ngokuqinisekileyo kwizixhobo ezinokubakho, endaweni yeemveliso abazivelisayo. Oku kufuna ukusasazeka, ukuba sinethemba lokwenza ukuthembela kwinkcubeko kunye nentembeko edibanisa iziko lemfundo kunye nemibutho yokuxhasa ye-OSGeo kunye neenkampani ezinikezela ngenkonzo ezinxulumene noko.
Jonga umboniso wokuqala
Jonga yonke imiboniso yeFOSS4G 2010
Landela uGabriel Reyes
Post edlulileyo«Ngaphambilini LiDAR kunye ne-DIELMO 3D
Post Next Izibambiso kunye nezinye iingoziOkulandelayo »